Waa maxay iyo sida loo sameeyay webiga ciidda | Saadaasha Shabakadda
Mid ka mid ah ifafaalooyinkii ugu yaabka badnaa ee lagu faafiyo adduunka oo dhan ayaa ahaa webi ciid ah. Waana inay tahay webi qaas ah maadaama uusan biyo wadan, laakiin ciid. Waxaa jiray aragtiyo badan oo ku saabsan dhacdadan iyo waxa ay ahayd suuragalnimada asal ahaan. Waxay ka dhacday Ciraaq oo fiidiyow lagu faafiyey adduunka oo dhan. Dad badan ayaa sheegay inay ka mid ahayd nooc ka mid ah apocalypse maadaama ay tahay wax ka baxsan caadi.
Qormadan waxaan kuugu sheegaynaa waxa asalka dhabta ahi yahay iyo astaamaha uu leeyahay webiga ciidda.
1 Xaaladda cimilada qalaad
2 Xaqiiqda webiga ciidda
3 Sidee webiga ciidda loo sameeyay
Xaaladda cimilada qalaad
Gobolka Ciraaq wuxuu u taagan yahay cimilo qalalan halkaas oo ay ku leeyihiin carro ciid badan. Meesha ay dhacdadani ka dhacday waxay ahayd lama degaanka Rub al Khali, caan ku ahaa inuu noqdo lamadegaanka ciida ee ugu weyn meeraha oo dhan. Dhacdadan la yaabka leh ee dabeecadda waxaa qabtay taageere fiidiyoow maalmo gudahoodna fiidiyowgu wuxuu ku faafay adduunka oo dhan. Fiidiyowga waxaad ku arki kartaa dhacdo la yaab leh oo dabiici ah halkaas oo aad ka arki karto sida webi ciid ah uu ugu socdo bartamaha lamadegaanka.
Sida iska cad ifafaaladan dabiiciga ah ee layaabka leh waxay qabataa dareenka dhammaan dadka deegaanka maadaama ay umuuqato wax ka baxsan xadka dabiiciga ah. Marka ay jirto duufaan ciid ah oo lamadegaanka ku yaal, sida caadiga ah wuxuu socdaalaa dhowr kiiloomitir dabaysha xoogga leh awgeed. Si kastaba ha noqotee, haddii aan daawanno fiidiyowga waxaan arki karnaa inay si dabayl ah u dhici weydo dabaysha iyo sida ay ciiddu u dhex mariso sariirta webi sidii inay tahay dheecaan. Dhacdadan run ma noqon kartaa?
Xaqiiqda webiga ciidda
Su'aasha ah ifafaalahaani inuu dhab noqon karo iyo in kale, waa inaad tiraahdaa maya. Waxa runtii sida webigu u qulqulaya maaha ciidda laakiin waa sacab muggiis oo dhagaxyo waaweyn oo roob dhagaxyaale ah. Fiidiyowga waxaa loo arki karaa mid ka mid ah markhaatiyaasha webigaan bacaadka ah inuu gacantiisa ku gaadhayo xilligan xaadirka ah isla markaana uu meesha ka saarayo waxa u muuqda mugga roob dhagaxyaalaha
Waana wakhtigaas qaabab kala duwan oo cimilo ah oo aan caadi ahayn ayaa la duubay, oo ay ku jiraan baraf. Waa inaan maskaxda ku haynaa in aagga Bariga Dhexe uu qalalan yahay oo uusan badanaa lahayn noocan oo kale ah dhacdo yaab leh. Gobolka laga helay wabigan bacaadka ah u istaagay inuu haysto cimilo qalalan. Si kastaba ha noqotee, waxaa ku dhufatay roob aad u xun iyo duufaan culus oo sababay roobdhagaxyada cabirka kubbadaha golf-ka inay soo dhacaan. Sababtoo ah cimiladu waa mid gebi ahaanba ba'an, dhammaan muwaadiniinta waxaa lagu wargeliyay halista waxyeellada duufaanadan.
Waxay ahayd dabeylaha kadib markii la arkay wabiga ciidda iyo lama filaan ah. Xaqiiqda dhabta ah ee webigaani waa waxa hada ku jira. Waxa dhab ahaan u eg qulqulka ciidda ee joogtada ah ee la midka ah xaaladaha webiga waa baraf. Waxay ku kulmeen cidlada baraf aad u tiro badan oo si dhaqso leh ugu sii gudbi doona Bariga Dhexe oo dhan. Waana xajmiga kubbadaha roob dhagaxyaalaha oo aad u weynaa oo ay si isdaba joog ah u socdeen inta ay dhalaalayeen. Webiga ciiddu waa wax aan ka badnayn tiro badan oo dhagaxaan baraf ah oo ku dul socda webiga.
Sidee webiga ciidda loo sameeyay
Wixii markii hore si fir fircoon ugu faafay sida webiga cammuudda ah ee Sacuudi Carabiya gabi ahaan sidaas ma ahayn. Waxa ugu horeeya waa inuusan ka jirin Sacuudi Carabiya, laakiin Ciraaq. Dhamaadka sanadka 2015, roobab mahiigaan ah iyo duufaanno aad u xoog badan ayaa ku dhuftay waddanka oo dhan halkaasoo waxa ugu caadiga ahi ay tahay kuleylka waa mid aad u daran xitaa waqtigaas sanadka. Dhammaan webiyada iyo durdurrada waxay ku daadiyeen waxa ku jira kubbadaha roob dhagaxyaalaha ah ee dul mara webiyaasha Furaat iyo Tigris. In heerarka qulqulka ay kordhayaan oo ay jiidayaan dhammaan kubbadaha roob dhagaxyada waqti isku mid ah oo ay ku dhalaalayeen heerkulka sare.
Markay roobdhagaxyaaleyaashu dhex wareegayeen aagag ciid ah, waxay lahaayeen midabka ciidda. Hadaad meel fog ka fiirsato waxaad arkaysaa inay u egtahay webi ciid ah oo ay tahay waxa laga sameeyay. Si kastaba ha noqotee, mar alla markii aad ku dhowaato socodka socda oo aad gacanta gasho waxaad arki kartaa inay yihiin kubbado baraf ah.
Dhacdooyinkaas saadaasha hawada ee aadka u daran waxay ku dhacayaan si xawli leh iyadoo ay ugu wacan tahay dhibaatooyinka deegaanka ee caalamiga ah sida isbedelka cimilada. Dhacdadan Ciraaq ka dhacday waxaa sidoo kale weheliyay mid ka mid xagaagii ugu kululaa ee horseeday heerkulka ilaa 52 digrii Baqdaad.
Waxaan rajaynayaa in macluumaadkan aad wax badan kaga baran karto aasaaska iyo asalka wabiga ciidda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Wabiga ciidda
Qaabka atomiga ee Rutherford